गुगल म्यापमा यसरी राख्नुस नयाँ लोकेसन।थारु पाेर्टल । -
अहिलेको बेला कम्प्युटरकाे बेला हाे समयमा कुनै सेवा वा सामान चाहिएको अवस्थामा गुगलमा सर्च गरेर खोज्ने प्रयोगकर्ताहरु निकै धेरै भइसकेको छ । यस्तोबेलामा कार्यालय, सार्वजनिक निकाय, पसल, व्यवसायदेखि सबैका लागि गुगल म्यापको उपस्थिति अनिवार्य जस्तै भइसकेको छ ।
यतिसम्म कि अब त हुलाक सेवाका लागि समेत गुगलको लोकेसन आधिकारिक रुपमा प्रयोगमा आइसकेको छ । कुनै समय यस्तो हुन्छ कि, गुगल म्यापमा कुनै एड्रेस सर्च गर्दा फेला पर्दैन । र नयाँ ठाउमा जानु पर्दा अरुलाई साेधीरहनु भन्दा गुगल म्यापमा गएर खाेजेर ठाउँ पत्तालगाएकाे कैयाे उदाहरण छ ।
यदि तपाईं पनि यसैगरी अभावको सामना गरिरहनु भएको छ भने आज हामी तपाईंलाई आफ्नो कार्यालय, पसल वा उपलब्ध नभएका स्थानको लोकेसन गुगल म्यापमा कसरी थप गर्ने भन्ने बारेमा सजिलो तरिका बताउँदै छौं ।
८. अब त्यसको मुनी उपलब्ध भएसम्म फोन नम्बर, खुल्ने समय, वेबसाइट, खुलेको समय र त्यससँग सम्बन्धित तस्वीरहरु राख्न सकिन्छ ।
९. ख्याल गर्नुहोस्, तपाईंले गुगलमा थप गरेको लोकेसन कम्पनीले पुष्टी गर्नेछ र त्यसपछि मात्र गुगल म्यापमा तपाईंले थप गरेको नयाँ स्थान देखिनेछ । यसका लागि २४ घण्टादेखि ४८ घण्टासम्म समय लाग्न सक्छ । टेकपाना बाट साभार